Ukutshabalaliswa okulawulwayo kwegama elithi 'rechts', iTump, i-Brexit (kunye nayo yonke into edibene nayo) iqalile: UMartin Vrijland
Kwiiveki zakutshanje siye sabona ukuchithwa okulawulwayo kwegama elichanekileyo 'elungileyo'. Loo mzobo kwakufuneka umelwe ngamagqabi aphephile aqeqeshiwe ngokufanelekileyo: ukusuka kuDonald Trump e-US, eMarine nasePen eFransi kuTeerry Baudet e-Netherlands. Loo mqondiso wawujoliswe ekuqinisekiseni ukuba ukucinga okubalulekileyo kwiimidiya kwanyanzeliswa ekucingeni i-conspiracy nakwinto efanelekileyo abantu abaphilileyo. Emva koko uphawu lwalufuneka luhanjiswe kumgangatho ogqithiseleyo kwaye lube luhlanga kwaye lube luhlobo oluthile kwaye luthandane nabasetyhini.
Ngokuqinisekileyo uDonald Trump usengumongameli wase-US kwaye ngokwenene inkqubo ye Brexit iyaqhubeka, kodwa ndixelele ukuba bobabini boba ngowokuqala kokuwa. I-Trump kwafuneka iqalise iimfazwe zorhwebo ukwenzela ukudala i-alibi enkulu yokuwa kwezomnotho (umbuso omkhulu) we-American empire. Ukungaphumeleli kwe-Brexit, mhlawumbi nge-no-deal okanye nangona (indlela entsha) ku hlawula u yilwayo ukuya eYurophu, kufuneka iholele ekuhlaleni kwezoqoqosho kwi-EU. Oku kufuneka kubonise ihlabathi lonke ukuba uphawu "lungile" (kwaye ke abagxekayo) yizona ziphulo zokungaphumeleli kunye nenhlekelele.
Isizathu sokuba sibone uDonald Trump ecindezela iMeya yaseLondon ngesonto eledlule kwaye isizathu sokuba wabize umfazi weNkosana uHarry Markle "yinto engathandekiyo" sizathu esifanayo sokuba simbonise umfazi-angamthandabuzo kwaye wayenxulumene neentlobano zesini umdlali. Kumele abe nomfanekiso ogqithiseleyo, ukwenzela ukuba abantu bafumane i-wings-right entle ngokukodwa. Ukuba loo nhla iyaxhunywa kuyo yonke intshukumo ye-wing (ilungelo 'lelungelo'). Konke okucatshangelwayo ngokuthengisa (propaganda).
Ungayinxulumanisa elo qela kwi-brand-entsha-brand-old-brand. Sivele sibona uphawu oludala. Ividiyo elapha ngezantsi ibonisa indlela ikhonkco le-brand elidala sele lenziwe ngayo. Ividiyo ihamba ngegciwane kwi-Facebook yaye ibonisa ngokucacileyo injongo. Inkcaso yezopolitiko ezilawulwayo kunye namajelo aseburhulumenteni baye baqinisekisa ukuba ilungelo liba ngumqondiso kwaye zonke iimbono zihlanganiswe ngcamango yaxutywa. Akusekho malunga neembono zakho; Ingongoma kukuba xa unombono, ngokuzenzekelayo ungoko lohlobo. Kwaye i-brand manje iqhagamshelwe inyathelo kwi-brand 'yamaNazi'.
Ipropaganda enengqiqo ebonisa ngokugqithiseleyo indlela ukusebenzisana ngayo kweendaba, ezopolitiko kunye neendaba zoluntu zisebenza. Imifano kwividiyo ibonisa imifanekiso ecacileyo ukuba iyunifom idibaniswe nentshukumo efanelekileyo (ukuzenzela) ukunyakaza. Ikhonkco elisezantsi kodwa elicacileyo le vidiyo lenza oko kuthethwa kwi-25e yesibini kwividiyo: "Mhlawumbi ndikhulu kakhulu okanye yintoni?"Cofa kwiimibhalo engezantsi).
Musa ukugxeka kwiqela elithile lezopolitiko okanye ngakwesobunxele okanye ngakwesokudla. Yeka ukuvota, ungathathi inxaxheba kumdlalo wezopolitiko wokwakha izakhiwo. Ekugqibeleni uya kugxothwa kwiqela labantu abanoxanduva kunye namaNazi. Ukucinga okucwangcisiweyo kufuneka kuvalwe kwisongelo ekuzinzile nasekuxolweni.
tags: cingela, ukusela, eziziimbalasane, ibhayisikobho, im, unxibelelwano, uphawu, nazi, AmaNazi, nazikeule, Nazism, kunene, Empire, ukunyaniseka, yokuzonwabisa
13 Juni 2019 kwi-13: 03
Ewe kubonakala ngokucacileyo ... ivolon donald, marie le le penn kwaye kwithuba lokugqibela kwaye i-fvd yayibetha amaSulumane kwi-lmfao. Ndicinga ukuba isisombululo sinokufudukela kwamanye amazwe ... kwaye ke andivoti ... bafuna imfazwe yombutho e-NL kodwa ukuba bafanele ukudala uxinzelelo, batyala ilungelo loqoqosho, amaSulumane ukulungiswa njl njl njl.
I-motonic i-motto iyalungiselela ngaphandle kweengxabano. Ndine-motto ... i-chaos iphuma kwi-chaos kwaye niqinisekise ukuba akukho myalelo onokuvela. Bafuna ukusebenzisana kwamacandelo olondolozo ukuba asebenze njengentlanzi yokubhubhisa okulawulwayo, ngaphandle kokuba i-brake apho iyakubakho ukuxhatshazwa ngokusisigxina.
Musa ukuvota kwaye ukhuthaze ukufuduka kwamanani ... xelela abantu ukuba ezinye izigidi zinokuthi ziphumelele.
Lo mfundisi omtsha waseSweden wathi nabo basenokuthatha i-30 yezigidi ezizweni. Ukuba ngokwenene bafuna ukutshabalalisa umgca omhlophe, abayi kuxhoma kwiwashi enkulu kwaye bakuqaphele ngeengxelo ezinjalo. Ngaba ubungabonakalisa izicwangciso zakho kakhulu lol?
Vumela yonke into ibhujiswe .. ke zonke izityalo zamandla enyukliya ziza kubhujiswa, i-Israel, iU.SA kunye nehlabathi lonke liya kuhlulwa .. U-Israyeli uya kubuyela kwi-Stone Age kunye ne-elite iya kuba nezandla ezingenanto. Vele udlale umdlalo ekufeni ukuze ubone ukuba ngaba baqaphele
13 Juni 2019 kwi-13: 38
Inqaku elikhulu, livuma ngokupheleleyo! Emva koko, isimo se-quo asinokuba sengozini. Hlalani nenyathelo, nwavule ukuhlawula irhafu, nikhuphe ilizwi lakho kwaye ukuba liphumelela unako ukunciphisa amandla akho okucinga ukuba ubuncinci. Ukucinga okucwangcisekileyo kwenziwa kuwe ngabahamba ngeenyawo abaphumelele ngempumelelo inkqubo yokufundiswa ...
13 Juni 2019 kwi-15: 52
13 Juni 2019 kwi-16: 04
oh kakuhle i-luciferian pyromaniacs ziye zatshisa indawo ezininzi ezitshisayo ukuze zitshintshe umunwe wazo kamva. Ukungathethi ngeetriliyoni zeemveliso eziye zenyuka ngokubonakalayo kwixabiso elingenambi ukusuka kwi-2008 kwaye zikwiphepha leemali zeebhanki ezahlukeneyo, cinga ngeDeutsche Bank
15 Juni 2019 kwi-00: 03
kakuhle, ngokutsho kukaChris kwi-IMF, kukho ezinye izizathu ezongezelelweyo (funda izixhobo zomlilo) .. faka isandla sakho esifubeni sakho (ukukhwehlela) ho kodwa but
17 Juni 2019 kwi-12: 37
basengamanyathelo am phambili kwam emva kokuba bonke abahlulekayo ukudibanisa, ngoku iibhanki ezibi ze-50 ezigidigidi ukubeka zonke iiligidi zezigidi ezivela kuyo ... 😀 kakuhle ingcamango
18 Juni 2019 kwi-12: 54
Kuba ngumsebenzi obuhlungu, uhluke kakhulu emva kwee-hosanna iingxelo ezivela kwiinyanga ezimbalwa ezedlulileyo.
Ewe i-Klaas (BIS) Andiyi kukukholisa ngeengalo zakho zengalo zasendle, igama elithi ECB kunye noDraghi aluwa phantsi kwengxabano yakhe yonke into, emva kwemini
18 Juni 2019 kwi-13: 55
kunqunyulwa, kuhlutywe kunye nokukhaba, kodwa i-Neanderthal ihleli. Kuphela abantu base-madurodam bathandekayo
18 Juni 2019 kwi-16: 33
hahaha ukuba uKlaas, siyazi ngubani olawulwayo
11 Julayi 2019 kwi-13: 33
13 Juni 2019 kwi-16: 02
Kaloku oko ubhalayo kuchanekile!
Abantu abangakwazi ukucinga ukuba ngubani ojongene nale nto.
akukho thixo okanye umyalelo wabhala wathi:
16 Juni 2019 kwi-16: 46
UMartin VRIJLAND uphinde uhlasele izipikili kunye neentloko. Umbono endiwamkele ngokupheleleyo iminyaka kwaye andingenakubeka amagama angcono.
Ukususela kwimemori yabantu, kuye kwaye kwagqithisa kakhulu ukugubungela ngeentsimbi zeentsapho zethu. Makuvumeleke ukuba umntu we-serf akwazi / abe neengubo zonke ...
Yonke into ithetha rhoqo.
Umdlalo Omkhulu uyacaca ngakumbi kulabo abazama ukujonga:
ukuchithwa okulawulwayo kwimeko yoluntu ngenkqubo yemfazwe yombutho (kufundwa: ukulawulwa kwabantu), ukutshabalalisa (kufundwa: ukulungiswa) ngokungaziphathi kakuhle kwabangamaSulumane abangenalwazi, okukhokelela ekuhlaselweni okukhulu koqoqosho okubhekiselelwe kuyo "okulungileyo" (egameni?) I-AHRIMAN (funda: Rudolph STEINER), i-REDEMEMER (oko kukuthi, i-catalism / i-judeo-christianism / inkolo yehlabathi enye) izisa oko kuthiwa usindiso, oluya kuhlalwa yinto engathandabuyo ngaphandle kwothando lomvu.
Le meko yonke isebenze ngempumelelo kwiminyaka embalwa eminyaka. Ingqungquthela enobungcali, xa undibuza ...
« Unokuzisa utshintsho kunye nokukhetha kwakho!
I-Max, Ingxaki, Isisombululo sichaze »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.976.438
Riffian op Intsholongwane ye-corona ('i-Wuhan virus') ine-patent yesiNgesi: inombolo ye-EP3172319B1